TOBY RATSIMANDRAVA: Tontosa ny dinikasa niarahan’ireo mpisehatra amin’ny fandriampahalemana – Madatopinfo
Nifarana ny zoma 26 febroary ny fivoriana fanao isaky ny 3 volana teo amin’ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny zandarmariam-pirenena, ny polisim-pirenena, ny tafika, ny atitany sy ny fitsarana izay notanterahana teny amin’ny Toby Ratsimandrava Andrefan’Ambohijanahary. Nandray anjara tamin’io dinikasa io ihany koa ny tany amin’ny Faritra tamin’ny alalan’ny « visioconférence ».
Niompana tamin’ny fandinihana ny dinikasa hanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ireo mpisehatra ireo izany fivoriana izany mba hampanjakana ny fandriampahalemana eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. Tafiditra tao anatin’ny lahadinika ihany koa ny fanaovana ny tomban’ezaka tao anatin’ny 3 volana toy ny lesoka tokony harenina eo am-panatanterahana ny asa ho an’ny tanindrazana. Raha ny tamin’ity 2 volana voalohan’ny taona 2021 fotsiny no horesahana dia fantatra fa miisa 29 ireo zandary naratra ary 4 no nodimandry teo am-panatanterahana ny asany. Manoloana izany dia misy hatrany ny fanamafisana ny fahaiza-manao hisorohana izany. Ankoatra izay dia nanambara ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarmariam-pirenena,Jeneraly Richard Ravalomanana fa tsy ekena intsony ny fanambaniana sy fanamaivanana ny asan’ny tafika sy ny zandary ary ny polisy. Handray andraikitra avy hatrany izy ireo raha mbola misy tranga tahaka izany. « Miantso ny vahoaka ho tony manoloana ny fepetra raisin’ny mpitandro filaminana amin’ny fampiroboroboana ny fandriampahalemana eto amintsika ary manao antso avo ho an’ny rehetra ihany koa mba tsy hovoasariky ny endrika fanakorontanana isan-karazany », hoy ny Ministry ny filaminam-bahoaka nanamafy.